Ra?isalwasaaraha Soomaaliya oo booqday xerada 54-aad ee ciidamada daraawiishta Puntland (Sawiro) – Radio Daljir
Maarso 11, 2013 4:39 b 0
Garoowe,Ra11 March,2013?Ra??isalwasaaraha dowladda federalka ah ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) iyo waftigii la socday? ayaa maanta booqday xerada 54-aad?ee ciidamada daraawiishta Puntland.
Socdaalka ra?sysalwasaaraha waxaa sidoo kale ku wehliyay madaxweynaha Puntland ?Dr C/raxmaan Maxmed Maxamuud (Faroole ),qaar ka mid ah golayaasha dawladda iyo saraakiisha sar sare ee ciidamada Puntland.
Xerada 54-aad? oo ku taala ?duleedka waqooyiga ee magaalada Garowe ayaa ra?isalwasaaruhu kormeeray qeybaha ciidanka daraawiishta Puntland ee fadhiisinka ku leh xeradaas.
?Kooxda Fanaaniinta?ciidanka qalabka sida ee Horseed ?Puntland ayaa waftiga ra?isal wasaaraha ?kusoo dhaweeyay suugaan kala duwan oo lagu amaanayay? dowladda federalka? iyo Puntland waxaana ay warbixin ka dhageysteen saraakiisha sar sare ee ciidamada daraawiishta Puntland?
Waftiga ayaa dib ugu soo laabtay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garowe halkaas oo uu ?maanta ka furmay kulan labo geesood ah oo ay wada qaadanayaan Ra?isalwasaare (Saacid) iyo madaxwayne (Faroole),waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda laga soo saaro ?qodobada ?ay isla meeldhigaan labada dhinac, waa Dawladda Federaalka ah ?iyo Puntland.
Ururka midnimo oo soo dhaweeyey go’aanka gudiga KMG ee Doorashooyinka Puntland